चीन T टी फ्लेक आइस मेशीन कारखाना र आपूर्तिकर्ता हर्बिन आइस सिस्टमहरू
5T फ्लेक आइस मेशीन
T टी / दिन फ्ल्याक आइस मेशिन प्रत्येक २ 24 घण्टा भित्र tons टन बरफ फ्ल्याक्सहरू बनाउनका लागि।
हामी T टी / दिन फ्लेक आइस मेशीन आपूर्ति गर्दछौं। २ वर्षको ग्यारेन्टीको साथ उच्च गुणस्तर। हामी २०० since पछि फ्लेक आईस मेशिनको लागि आफूलाई समर्पण गर्दछौं, र हाम्रा मेशिनहरूले अधिकांश यूरोपियन र अमेरिकी बजारहरू समेट्छन्। हामी तपाईंलाई हाम्रो स्थिर र पावर सेभ फ्लेक आईस टेक्नोलोजीको साथ सेवा दिन आशा गर्दछौं।
१. हाम्रो T टी / दिन फ्लेक आइस मेशीनले बनेको बरफ।
हाम्रो फ्लेक आइस मेशिनहरू द्वारा बनेको बरफ फ्लेक्सहरू उत्तम शीतलन प्रदर्शनको साथ राम्रोसँग स्थिर छन्। आइस फ्लेक्स बाक्लो र सुक्खा छन्।
करिब tons टन त्यस्ता उच्च गुणस्तरका बरफ फ्लेक्सहरू २ 24 घण्टा भित्र दिनहुँ बनाउन सकिन्छ, र त्यो बरफ दैनिक उत्पादक क्षमता 30० सी परिवेश तापमान, २० सी इनलेट पानीको तापमानमा आधारित हुन्छ।
बरफ मोटाई दायरा 1.5-2.3mm को बीच हो। र बरफ मोटाई समायोज्य छ।
त्यस्ता बरफ फ्ल्याक्सहरू व्यापक रूपमा माछा फ्रिज गर्ने, खाना ताजा राख्न, फूड प्रसंस्करण, क concrete्क्रीट कूलि fish, बोर्ड फिश आईसिंगमा, रासायनिक प्रयोग आदिका लागि प्रयोग गरिन्छ।
तिनीहरू हरित शक्ति बचत फ्लेक आइस मेशिनहरू द्वारा बनेका छन्, र हरेक १ टन हिउँ फ्लेक्स बनाउनको लागि विद्युत खपत मात्र 75 75 केडब्ल्यूएच छ।
२. विवरणहरू को 5T / दिन flake आइस मेशीन।
हाम्रो T टी / दिन फ्लेक आइस मेशिनको क्षमता C० सी एम्बियन्ट तापमान र २० सी इनलेट पानीको तापमानमा आधारित छ। त्यो मानक कार्य अवस्थाको साथ, यसले २ 24 घण्टा भित्र लगभग tons टन आइस फ्लेक्स बनाउन सक्छ।
यो सिल्वर अल्यु इभ्यापोरेटरबाट सुसज्जित छ, जुनसँग उत्तम थर्मल चालकता छ। पानी र रेफ्रिजरन्टको बीच तातो आदान प्रदान धेरै कुशलतापूर्वक गर्न सकिन्छ। यस कारणका लागि, यस TT / दिन फ्लेक आइस मेशिनले tons टन बरफ फ्लेक्सहरू बनाउन only 375 केडब्ल्यूएच मात्र बिजुली खपत गर्दछ। अन्य चिनियाँ T टी / दिन फ्लेक आइस मेशीनले कम्तिमा tons२5 किलोवाट बिजुली खपत गर्दछ जुन tons टन आइस फ्लेक्स बनाउनको लागि छ। दैनिक विद्युत खपत फरक १K० केडब्ल्यूएच छ।
१० बर्षमा फरक 54 547575०० किलोवाट बिजुलीको हुनेछ। हामी 150x365x10 = 547500 प्रयोग गरेर हिसाब गर्छौं।
मेरो T टी / दिन फ्लेक आइस मेशिन छनौट गर्नुहोस्, तपाईले १० वर्षमा 75 547575०० किलोवाट बिजुली बचत गरेर बिजुली बिलको लागि धेरै कम तिर्नुहुनेछ।
T० / fla दिन फ्लेक आइस मेशिनमा %०% कम्पोनेन्टहरू अन्तर्राष्ट्रिय प्रसिद्ध ब्रान्ड हुन्। कम्प्रेसरहरूको लागि हामी बिट्टार, GEA Bock, Frascold, Refcomp, र यस्तै अन्य मध्ये छान्छौं। तेल वाहक, लिक्विड रिसीभर र यस्तै अन्य दबाब जहाजहरूका लागि, हामी इमर्सन वा ओ एन्ड एफ चयन गर्दछौं जुन सब भन्दा लोकप्रिय र व्यापक रूपमा शीर्ष गुणवत्ता रेफ्रिजरेसन प्रणालीहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ। यस बीच, डानफोस भल्भहरू, जीहल-अबेग फ्यानहरू, स्नाइडर बिजुली भागहरू, र यस्तै अन्य हाम्रो 5T / दिन फ्लेक आइस मेशिनहरूमा प्रयोग गरिन्छ।
यहाँ केहि अवयवहरू र हाम्रो T टी / दिन फ्लेक आइस मेशीनमा विवरणहरूका लागि केहि तस्वीरहरू छन्।
Para. प्यारामिटर को 5T / दिन flake आइस मेशीन।
1 प्यारामिटरहरू चश्मा
2 मानक परिवेश तापमान ℃० ℃
3 मानक इनलेट पानी तापमान २० ℃
4 पानीको स्रोत ताजा पानी
5 बिजुली आपूर्ति 400V / 4P / 50Hz
6 काम गर्ने अवस्था राम्रोसँग हावा पाइन्छ
7 मोडेल HBF5T-R4W
9 बरफ दैनिक उत्पादक क्षमता २ tons घण्टा भित्र tons टन बरफ फ्लेक्स
10 रेफ्रिजरेसन क्षमता २.3..3 केडब्ल्यू
11 वाष्पीकरण तापक्रम माइनस १℃ ℃ - माइनस २० ℃
12 बरफको तापक्रम -5 Bel मुनि
13 फ्लेक्स हिउँ मोटाई १.8-२.२ मिमी
14 बरफ बनाउनको लागि उर्जा Ton 75KWH १ टन बरफ फ्लेक्स बनाउनका लागि
15 हल्ला D 78dBA २ मिटर भित्र
16 पूर्ण मेसिनको चालु शक्ति १.6.25२25 किलोवाट उर्जा बचत !!!
18 पानी कूलि tower टावर पम्प र फ्यान मोटर 1.5 + 0.55 = 2.05KW
19 पानी कंडेन्सर तातो विनिमय क्षमता 100KW
20 वाष्पीकरणमा बरफ कटरको रिडुसर ०.55 केडब्ल्यू
21 वाष्पीकरणकर्तामा पानी परिसंचरण पम्प ०.२२ केडब्ल्यू
22 नियन्त्रण प्रणाली PLC नियन्त्रण कार्यक्रम
23 आइस flake घनत्व ~ ०० ~ 5050० किलोग्राम / एम।
24 फ्लेक आइस मेशीनको वजन १00०० किलो
25 फ्लेक आइस मेशिनको आयाम LxWxH = 2300x1900x1800mm
।। मानक 5T / दिन flake आइस प्लान्ट को ड्राइंग।
धेरै ग्राहकहरु सँगै एक T टी आइस कोठामा काम गरीरहेको 3T / दिन flake आइस मेशीन छनौट गर्न चाहन्छन्। त्यो TT / दिन फ्लेक हिउँ प्लान्टको लागि पनि हाम्रो मानक हो।
5T / दिन फ्लेक आइस मेशीन 3T आइस कोठा माथि अवस्थित छ।
बरफ कोठा १०० मीमी मोटाई संग तातो इन्सुलेटेड प्यानल बाट बनेको छ, र बरफ फ्लेक्स लामो समय सम्म पग्लन बिना भित्र राख्न सकिन्छ। आइस फ्लेक्स स्वत: बरफ कोठामा खस्छ।
T टि आइस कोठाले tons टन आइस फ्लेक्स भण्डारण गर्न सक्दछ, र त्यो सबै आइस फ्लेक्सहरू भण्डारण गर्न पर्याप्त छ रातको समयमा बनेको T टी / दिन फ्लेक हिउँ मशीनले।
त्यो रेखाचित्रमा, तपाईं बरफ मेसिनको छेउमा पानी चिसो टावर देख्न सक्नुहुन्छ। यो बरफ प्रणाली बाट परिवेश मा ताप को जारी गर्न प्रयोग गरीन्छ। पानी कूलि tower टावर खुला क्षेत्रमा अवस्थित रहन सुझाव दिइन्छ, जस्तै भवनको माथि, सुविधाको बाहिर र त्यस्तै अरू। डिजाइन गरिएको पानी कूल्डको कडा सिफारिश गरिएको छ तातो क्षेत्रमा काम गर्न।
बरफ कोठाको आकार ग्राहकको आवश्यकता अनुसार अनुकूलित गर्न सकिन्छ।
वाटर कूइ con कन्ड्सेन्सरको छेउमा, हामी मेशीनलाई एयर कूलि con कन्डेन्सर + एयर कूलि fans प्रशंसकले लैजान पनि सक्दछौं। र हामी प्रयोगकर्ताको स्थानीय उच्चतम र सब भन्दा कम परिवेशको तापमान अनुसार प्रणाली डिजाइन गर्नेछौं।
Product. उत्पाद भविष्य र T दिन / दिन फ्लेक आइस मेशीनको अनुप्रयोग।
उत्तम कूलि performance प्रदर्शनको साथ ड्राई र फ्रिज हिउँ फ्लेक्स। आइस फ्लेक्स समुद्री खाने जमिनको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ, खाना ताजा राख्न, फूड प्रसंस्करण, कंक्रीट कूलि,, बोर्ड फिश आईसिंगमा, रासायनिक प्रयोग र यस्तै।
Deli. डिलिभरी, शिपिंग, सेवा र T टी / दिन flake आइस मेशीन को वारंटी।
एक २० फिट कन्टेनर एक 5T / दिन फ्लेक आइस मेशीन, आइस कोठा, स्टील फ्रेम सहित आइस मशीन र छोरालाई समर्थन गर्न एक पूर्ण complete टी / दिन फ्लेक आइस प्लान्टमा पर्याप्त हुन्छ।
हामी मेशिनको लामो जीवनमा लामो समयमा अनलाइन परामर्श सेवा प्रस्ताव गर्दछौं। हामी DHL द्वारा नि: शुल्क कम्पोनेन्टहरू प्रस्ताव गर्दछौं यदि मेसिनको कम्पोनेन्ट्सको वारंटीमा गुणवत्ता समस्या छ।
फ्लेक हिउँ इभ्यापरेटरको वारेन्टी २० बर्ष हो, हामी बाचा गर्छौं बाष्पीकरणको ग्यास चुहावट हुँदैन, २० बर्ष भित्र कुनै विकृति छैन।
Years बर्ष मोटर्स, पम्पहरू, बीयरि ,हरू, फ्यानहरू, विद्युतीय कम्पोनेन्टहरू र अन्य गतिशील भागहरूको ग्यारेन्टीको लागि हो।
१ years बर्ष दबाव उपकरणहरु, कंडेन्सर, कम्प्रेसर, भल्भ र यस्तै अन्य को लागी वारंटी हो।
।। TT / दिन flake आइस मेशीन बारे FAQ।
Q: 5T / दिन flake आइस प्लान्ट को लागी कति छ?
A: T दिन / दिन फ्लेक हिउँ प्लान्टको लागि मूल्य १ 13 USD०० अमेरिकी डलर र २०० अमेरिकी डलरको बीचमा छ।
मूल्यहरु मेसिनको कम्पोनेन्ट सूची र बरफ कोठाको आकारमा निर्भर हुन्छ। मूल्यहरु एफओबी शेन्जेन अमेरीकी डलरमा आधारित छन्, र तिनीहरूले फ्रेट लागत समावेश गर्दैन। ग्राहक आफैंले भाँडा किन्न पर्छ।
प्रश्न: हाम्रो फ्लेक आइस मेशीन र अन्य चिनियाँ फ्लेक आइस मेशीन बीच के भिन्नता छ?
A: सबैभन्दा ठूलो भिन्नता भनेको हाम्रो शक्ति बचत टेक्नोलोजी हो।
हामी Chromed स्लिभर मिश्र प्रयोग गर्दैछौं इभ्यापोरेटरलाई उत्तम र सबै भन्दा कुशल थर्मल चालकताका लागि।
समान कार्य अवस्थामा, मेरो T टी / दिन फ्ल्याक आईस मेशीनले 37 375 केडब्ल्यूएच बिजली दैनिक उपभोग गर्दछ, जबकि अन्य चिनियाँ फ्लेक हिउँ मशीनहरूले कम्तिमा 52२5 केडब्ल्यूएच उपभोग गर्दछ।
हरेक दिन, फरक १K० किलोवाटको बिजुली हो।
१० बर्षमा फरक 54 547,500०० किलोवाट बिजुली हो।
२० बर्षमा, भिन्नता १,० ,000 ,000 हजार किलोवाट बिजुली हो।
बरफ बनाउनको लागि तपाईंको सबैभन्दा ठूलो निर्माण लागत बिजुली हो। सफल र लाभदायक बरफ व्यवसायको कुञ्जी मेशिनको शक्ति बचत टेक्नोलोजी हो।
मेरो पावर सेभ टेक्नोलोजीको साथ, तपाईं साना बिजुली बिलको लागि भुक्तान गरेर तपाईंको बरफको लाभ बढाउन सक्नुहुन्छ।
मेरो पावर सेभ टेक्नोलोजीको साथ तपाईं आफ्नो प्रतिस्पर्धीहरू भन्दा कम मूल्यको साथ बरफ बेच्न सक्नुहुनेछ, र तपाईं छिट्टै आफ्नो प्रतिस्पर्धीहरूलाई बजारबाट बाहिर निकाल्न सक्नुहुनेछ।
यसका अतिरिक्त, हामीसँग पावर बचतको लागि मद्दत गर्न अतिरिक्त उपकरण छ।
हामी यसलाई पावर सेभर भनौं। बेकार / निष्क्रिय विद्युत तरंगहरू पावर सेभर द्वारा फिल्टर गर्न सकिन्छ, त्यसकारण यसले सम्पूर्ण प्रणालीको उर्जा खपत%% -8% ले घटाउन सक्छ।
पावर सेभरको मूल्य अमेरिकी डलर 000००० / सेटबाट सुरू हुन्छ, र यो प्रणालीको कुल स्थापित शक्तिमा निर्भर गर्दछ।
अमेरिकी डलर 3००० 5T / दिन फ्लेक आइस प्लान्टको पावर सेभरको लागि मूल्य हो।
१० टी / दिन फ्लेक आइस मेशीन
१T टी / दिन फ्लेक आइस मेशीन
२० टी / दिन फ्लेक आइस मेशीन
२T टी / दिन फ्लेक आइस मेशीन
30T / दिन flake आइस मेशीन
ठूलो फ्लेक आइस मेशिनहरू
अघिल्लो: ०.TT घन बरफ मशीन
अर्को: 30T फ्लेक आइस मेशीन
3T फ्लेक आइस मेशीन
२० टी फ्लेक आइस मेशीन
2T फ्लेक आइस मेशीन
30T फ्लेक आइस मेशीन
१० टी फ्लेक आइस मेशीन